MARATHON INTERNATIONAL DE TANA: Niteraka fahombiazana ny fahamaroan’ny mpanohana. | déliremadagascar
MARATHON INTERNATIONAL DE TANA: Niteraka fahombiazana ny fahamaroan’ny mpanohana.
Sport	 16 décembre 2017 R Nirina
Tafiditra ao anatin’ny fandaharan’asan’ny federasiona an’ny atletisma ny Marathon International de Tana (MIT). Nampiray ireo atleta avy amin’ny firenena isan-karazany. Nahazo tombony tamin’ny andiany faha-17 ny atleta Malagasy. Nitana ny laharana telo voalohany ny Malagasy tamin’ny hazakazaka tamin’ny halaviran-dalana 42.195 km ho an’ny sokajy lehilahy. Nisaotra ny mpanohana ny hetsika rehetra ny World Trade Center Tana (WTCT). “Nanome tosika ara-moraly ny mpilalao Malagasy ny fahamaroan’ny mpanohana “, hoy ny mpikarakara sady Tale ara-barotra ny WTCT, Mercédès RATSIRAHONANA.
Nambaran’ny solontenan’ny Ministeran’ny tanora sy ny fanatanjahantena , Rosa RAKOTOZAFY fa fanantenana hampisondrotra ny lanjan’ny fanatanjahantena eto Madagasikara ny fanohanana nataon’ny orinasa China Road and Bridge Corporation (CRBC), Star, Schneider Electric, Airtel Madagascar, ORATANA, VIMA, SE/CNLS sy ny maro tsy voatanisa. Manao antso avo ny tenany amin’ny fanomezan-tanana amin’ny fampiroboroboana ireo taranja hafa .
Ankoatra ny federasionan’ny atletisma, manatitra ny fisaorana ho an’ny andrim-panjakana toy ny Ministeran’ny tontolo iainana, ny Ministeran’ny fizahan-tany….nanampy tamin’ny fanatontosana ny hetsika ihany koa ny mpikarakara.
Nihemotra ny MIT andiany faha- 17 noho ny fiparitahan’ny valan’aretina pesta teto Madagasikara. Na dia teo aza izany, 1270 ny atleta nandray anjara tamin’ny hetsika raha 2000 no tanjona. Niteraka fantiantoka ny fisian’ny pesta. Namerina nividy tapakila handehanan’ireo mpikatroka avy any ivelany ny mpikarakara. Teo ihany koa ny fanaovana fangatahana fahazoan-dalana vaovao. Hanatsara ny fomba fiasa ny mpikarakara amin’ny andiany manaraka.